London Archives | Save A tareenka
Waqtiga Akhriska: 5 daqiiqo filimada Harry Potter ahaayeen ugu taxane film guul waqtiga oo dhan. Muuqaalo badan oo ka mid ah filimadii Harry Potter ayaa lagu toogtay gudaha magaalada London lafteeda. Haddii aad tahay taageere dhinta-adag ee filimka Harry Potter ama taxanaha buugga, London shaki la’aan waa tan ugu fiican…
Waqtiga Akhriska: 3 daqiiqo Marka ay timaado in booqashada caasimadaha ugu caansan Yurub, London shaki la'aan waa ugu sareysa ee liiska dalxiis walba oo ay jiraan wax badan oo u sameeya london. Waxaa la helay muddo dheer ah, taariikh xiiso; durkiya qurux badan oo indhaha ku; waxaana jira waxyaabo badan oo loo baahan yahay…